အကျင့်ပျက် တရားသူကြီးတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ သူရ ဦးအောင်ကိုတင်ပြ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » အကျင့်ပျက် တရားသူကြီးတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ သူရ ဦးအောင်ကိုတင်ပြ
အကျင့်ပျက် တရားသူကြီးတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ သူရ ဦးအောင်ကိုတင်ပြ
Posted by ကို သာ on Aug 11, 2012 in Myanma News |4comments
မြန်မာနိုင်ငံ တရားရေးမဏ္ဍိုင်၊့ ပြည်သူလူထု ရပိုင်ခွင့်တွေနှင့် ပတ်သက်ပြီး တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးအောင်ကိုက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို
တရားစီရင်ရေးမှာ တာဝန်မကျေပွန်သော၊ ဂုဏ်အင်္ဂါ အရည်အချင်း ပျက်ယွင်းသော တရားသူကြီးများ၊ ဝန်ထမ်းများကို ဖယ်ရှားပြီး ပြည်သူ့တွေက ရွေးချယ်သူတွေနှင့်
ပြန်လည်အစားထိုး ခန့်အပ်ရန်လိုကြောင်း စသဖြင့် ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု NLD ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအုန်းကြိုင်က ပြောပါသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံသည် တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု အနိမ့်ကျဆုံး နိုင်ငံစာရင်းမှာ ကမ္ဘာက ထည့်သွင်းထားသည်ကို တွေ့ရတယ်တဲ့။ တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင် အဂတိတရားများ
ဖုံးလွှမ်းနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်း ပြည်ပက ကျယ်လောင်စွာ ဝေဖန် အော်ဟစ်နေကြ တယ်။ ယိမ်းယိုင် တိမ်းစောင်းနေတဲ့ တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်ကို အချိန်တို ကာလအတွင်းဖြောင့်မတ်ကြံ့ခိုင်လာစေဖို့ ဆောင်ရွက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေက လက်တွေ့ဆန်တဲ့နည်းလမ်း ၃ မျိုးရှိပါတယ်တဲ့။
တရားသူကြီး၊ တရားရေးအရာရှိ လုပ်တဲ့ဟာက အဓိက မဟုတ်ဘူးတဲ့။ဖြောင့်မတ် မှန်ကန်မှုနဲ့ လူထုအပေါ် မေတ္တာထားရန်သာ ပဓာန ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
ဒါကြောင့်မို့လို့ တရားလွှတ်တော်ချုပ် အဆင့်တွေမှာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာပြည့်ဝတဲ့ ပြင်ပဥပဒေပညာရှင်များကိုပါ ထည့်သွင်းပြီးတော့ တာဝန်ပေးသင့် တယ်။
ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များက ပြည့်သူ့ အကျိုးစီးပွားဘက်က ရပ်တည်ပြီးတော့ ကာကွယ်ပေးရတယ်တဲ့။ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဖွဲ့သင့်တာမျိုး လုပ်သင့်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားစီရင်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကော်မတီကို တင်ပြ တိုင်ကြားသည်များ ရှိနေကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဆင့်မြင့် တရားသူကြီးတွေ၏
အဂတိလိုက်စားမှုတွေနှင့် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှု မရှိသောစီရင်မှုများအတွက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် ဥပဒေ တိတိကျ ပြဋ္ဌာန်းရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ အခြေခံဥပဒေမှာလည်း
တရားသူကြီးများကို ကာကွယ်ထားသည်ကို တွေ့သောကြောင့် တင်ပြရခြင်းဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားသည်ဟုသိရပါသည်။
ထိုအဆိုနှင့် သုံးသပ်ချက်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ဆွေးနွေးရန်ရှိကြောင်း
သို.သော်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းမြင့် တင်သွင်းသည့် Good governance(ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေး)၊ Clean government (သန့်ရှင်းသောအစိုးရ)ဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် ပြည်ထောင် စု အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခံရသူများသည် ၎င်းတို့၏ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်း၊ မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းနှင့် အကျိုးစီးပွားများကို ထုတ် ဖော်ကြေညာပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားရန်”အဆိုကို မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာ ကန့်ကွက်မဲများသဖြင့် လွှတ်တော်မှ အတည်မပြုနိုင်ခဲ့ပါ။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ လူမျိုးခြားများ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စိမ့်ဝင်ရောက်ရှိနေခြင်း၊ မသမာသော နည်းလမ်းများဖြင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားကိုင်ဆောင်ထားခြင်းများကို
ဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် အမျိုးသားရေး တာဝန်အဖြစ် အထူးစီမံချက်တစ်ရပ် ချမှတ်ဖော်ထုတ် အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်အဆိုအားလည်း သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့က အမျိုးသားလွှတ်တော်၌ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာတွင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အကျင့်ပျက် ခြစားမှုကို တိုက်ဖျက်ဖို့ဆိုလျှင်တော့ … အချိန်တိုနဲ့တော့ ဖြစ်မယ် မထင်ဘူး … တကယ်အကျင့်ပျက်မှုကို ပပျောက်ချင်တယ်ဆိုလျှင် .. ပွင့်လင်းမြင်သာအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ် …. …. ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ … သူ့ ဂွင်နဲ့သူ လှည့်ပတ်ပြီး သပွတ်အူလိုရှုပ်ထွေးစွာနဲ့ …. နည်းနည်းလာဘ်စားတဲ့လူ .. များများလာဘ်စားတဲ့ လူတွေအများစုနဲ့ ဖွဲ့စည်းနေလို့ပါပဲ …. ။
အခုထက်ထိ … တရားရုံးတွေ ၊ ဌာနဆိုင်ရာတွေကို ၀င်ထွက်တဲ့အခါ …အထောက်ထားစာရွက်အပြည့်စုံပါလျှင်တောင် … ရေမှ မလောင်းနိုင်လျှင် … စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းအောင် …အရစ်က ခံရတုန်းမို့ပါ …. ။ အာရုံတွေ နောက်လွန်းလို့ … ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ သွားရတဲ့ အလုပ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ခဲ့ပါတယ် …. ။
ကန့်ကွက်မဲများပြီး မဖော်ပြရဲလောက်အောင် ဖြစ်နေမှတော့ တိုင်းပြည်ကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြ အုံးမှာလဲဗျာ။
မိမိတိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်။——- တဲ့
အခုထိ မိမိကိုယ်ကိုကောင်း ကြိုးစားလို့မပြီးသေးကြပါလားနော်။
တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်မှာ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှု ရှိသော လာဘ်မစားဘူးတဲ့ တရားသူကြီးများ၊
တရားစီရင်ရေး ဝန်ထမ်းများကိုစာရင်းပြုစုပြီး ထုတ် ဖော်ကြေညာပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားရန်။
ပြည်ထောင် စု အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊
ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခံရသူများသည်
အဂတိလိုက်စားမှုမရှိ၊ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုမရှိ၊
နည်းနည်းမှလာဘ်မစားတဲ့လူ .. များများလည်းလာဘ်မစားတဲ့ လူတွေကို
စာရင်းပြုစုပြီး ထုတ် ဖော်ကြေညာပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားရန်။
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကိုလည်း ထိုနည်းတူ စာရင်းပြုစုပြီး
ထုတ် ဖော်ကြေညာပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ရန်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို အစီရင်ခံ တင်ပြခဲ့ပါလျှင်….
Good governance(ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေး)၊
Clean government (သန့်ရှင်းသောအစိုးရ)ဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက်
အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းများထဲက တစ်ခုဟု ဆိုနိုင်ပါ မလား။
သူ ခုတလောတင်ပြထားတဲ့ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တောင်းဆိုချက်လဲ အတော့်ကိုကောင်း
မွန်တာတွေ့ ရပါတယ်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ ရပ်ကွက်ထဲမှာ သိမ်ငယ်စွာနေရတဲ့အဖြစ်က